अहिले के गर्दैछन् छोरोबाट छोरी परिवर्तन भएकी सन्तोष पन्तकी छोरी ? – Kavrepati
Home / मनोरंजन / अहिले के गर्दैछन् छोरोबाट छोरी परिवर्तन भएकी सन्तोष पन्तकी छोरी ?
admin July 11, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 312 Views
काठमाडौ । नेपालको हास्य कलाकारिताका किङ्ग हुन् सन्तोष पन्त । कमेडी च्याम्पियन रियालिटी शोमा उनलाई कमेडीका बादशाह भनेर भनिन्छ । तर उनका कान्छा छोरा दश वर्ष अघि निक्कै चर्चामा आए । उनी छोराबाट छोरी भइन् । हिजोसम्म उनी प्रतीक थिए, कलाकार सन्तोष पन्तका कान्छा छोरा । त्यसपछि उनी केटलिन भएकी छिन्, पन्त परिवारकै कान्छी छोरीका रूपमा ।
Previous जसले मेस्सीलाई जबरजस्ती मैदानमा खेल्न पठाएका थिए, त्यसपछि मेस्सीले बनाए विश्व रेकर्ड को हुन् उनी ?
Next आउने साउन दुई गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा हुन्छ ?